Qaybta Dutchtown, Volume One • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Salaan Bulshada Ganacsiga Dutchtown!
Waxaan ahay Nate Lindsey, Madaxa Waddooyinka Weyn ee Dutchtown. Inkastoo aan qaar badan oo idinka mid ah aqaanay muddo sanado ah, waxaan ku faraxsanahay inaan si rasmi ah isu baro (gaar ahaan kuwa aanan si fiican u aqoon) oo aan bixiyo macluumaad ku saabsan shaqadayda Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tan ku sameeyo daabacaadda kowaad ee Qaybinta Dutchtown, oo ah daabacaad saddexdii biloodba mar ah gaar ahaan bulshadayada ganacsiga yaryar.
Waxaan ahay ku-tallaalid St. Louis. Ka dib markii aan ka qalin jabiyay Jaamacadda Kansas School of Law ee ku taal magaaladaydii Lawrence, Kansas, waxaan ka bilaabay xirfadayda la-hawlgalnimo Rasmussen Dickey MooreXafiiska Magaalada Kansas iyo laba sano oo gaaban ka dib waxaan is arkay anigoo xidhxidhaya oo u socda St. Louis si aan u furo xafiis cusub. Waxaan halkan u soo guuray si aan u wanajiyo shirkadeena si ay ugu adeegto macaamiisha goobaha dacwadaha ee aagga oo ay ku jiraan Magaalada St. Louis iyo Madison County, Illinois. Dhaqankaygu wuxuu ku lug leeyahay in aan matalo ganacsiyada iyo xirfadlayaasha marka la dacwaynayo ama haddii kale ay u baahan yihiin la-talin sharci ah.
Wax yar ka dib markii aan ka soo guuray dhammaan asxaabta iyo qoyskayga agagaarka magaalada Kansas, waxaan la kulmay xaaskayga Staci Harvatin. Waxaan ku noolaa dabaq sare oo magaalada hoose ah Staci waxay guri ku lahayd Dutchtown oo u dhow Dugsiga Sare ee St. Mary. Si aan sheeko dheer u soo koobo, aniga iyo Staci waanu is jeclaynay waxaana bilownay qoyskayaga oo ay ku hareeraysan yihiin taageero xaafadda Dutchtown. Markii hore, taasi waxay ahayd iyada oo loo marayo kaniisaddayada St. Anthony ee Padua, laakiin waxaanu isla markiiba kobcinay xidhiidhka Downtown Dutchtown, ururka ganacsiga, ka dibna meherado badan iyo derisyo badan oo aagga.
Waxa aan helnay waxay ahayd bulsho ay ka buuxaan wax-dhisayaal iyo rajo. In kasta oo ay jiraan caqabado Dutchtown ah iyo tobaneeyo sano oo maalgashi la'aan ah, dadka ku nool Dutchtown waxay u muuqdeen kuwo had iyo jeer isha ku haya midba midka kale oo isku dayaya inuu kor u qaado bulsho halgamaysa. Tani waa sababta aan u go'aansanay inaan qoyskeena ku soo korinno halkan-maxaa yeelay waxaan si dhab ah u aaminsanahay in deriskayadu ay si gaar ah ugu kalsoon yihiin naxariistooda iyo go'aankooda midba midka kale. Dutchtown waa gurigeena sababtoo ah waxay ka kooban tahay wax-dhisayaasha, sidaas awgeedna waa meel aan rabno inaan dhisno nolosheenna. Natiijo ahaan, Staci iyo aniga waxaan samaynay ballan qaadkayagii muddada-dheer ee xaafadda annagoo dib u hagaajinaynay guri bannaan oo ku yaal geeska Meramec iyo Louisiana. Anagoon ka labalabayn, waxaanu ugu yeedhnay “gurigayagii weligii”. Sannadaha soo socda, waxaan labadayada hooyo u guurnay Dutchtown waxaanan sidoo kale soo dhawaynay labadayada wiil ee Thaddeus iyo Francis.
Laga soo bilaabo 2016, waxaan ka shaqaynayay wixii hore u ahaan jiray Ururka Ganacsiga ee Downtown Dutchtown (wuxuu noqday 501(c)(3) kadib gudbintii CID -da Dutchtown, oo hadda loo yaqaan Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown). Hadda waxaan u adeegaa sidii Guddoomiyaha Guddiga iyo la-guddoomiyaha Guddiga Dhaqaale ee our. Guddiga muhiimka ah ee dhaqaalaha Dutchtown wuxuu diiradda saaraa xoojinta ganacsiyada Dutchtown ee jira iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale iyada oo sidoo kale ballaarinaysa oo ku kala duwanaynaysa saldhiggayaga dhaqaale maalgelin cusub.
Anigoo taas maskaxda ku haya, waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga mahadceliyo inaad akhriday qaybinta Dutchtown ee ugu horreysay. Qaybinta Dutchtown waxay noqon doontaa daabacaad saddexdii biloodba mar soo saarta guddiga dhaqaalaha dhaqaalaha. Hadafkayagu wuxuu noqon doonaa laba laab: (1) in aan la socodsiino bulshadayada ganacsiga yar yar waxa ay ka shaqaynayso Waddooyinka Wayn ee Dutchtown iyo (2) in aan bixino macluumaadka ku saabsan agabka ganacsiga yar yar ee jira iyo fursadaha bulshadeena ganacsiga yar. Milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ahaan, dhammaantiin waxaad tihiin milkiilayaasha saamiyada Dutchtown iyo Dutchtown Main Streets. Waad ku mahadsan tahay shaqadaada, waad ku mahadsan tahay waqtigaaga, iyo tan ugu muhiimsan, waad ku mahadsan tahay rajada aan wadaagno mustaqbalka Dutchtown halkaas oo ganacsiyadayada iyo deriskayadu ay si wadajir ah u koraan.
Madaxweyne, Waddooyinka Weyn ee Dutchtown
Waddooyinka Weyn ee Dutchtown Qorshe Hawleed Dhamaystiran
Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown Waxay si cajiib ah ugu faraxsan tahay inay hirgeliso Qorshe Hawleedkeedii ugu horreeyay ee 2022. Waxaad ka heli kartaa qorshaha oo faahfaahsan halkan link this, laakiin waxaan rabnay inaan muujino qaar ka mid ah mashaariicda soo socda mid kasta oo ka mid ah Guddiyada Waddooyinka Weyn ee Dutchtown waxay shaqayn doontaa rubuci hore ee 2022 iyo wixii ka dambeeya!
Guddiga dallacaadda ayaa la shaqayn doona Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown on kale Holand tag! dhacdo halkaas oo aanu ka wada shaqayn doonno kor u qaadida fursadaha hantida ma-guurtada ah annagoo isha ku hayna iibsadayaasha guryaha markii ugu horeysay! Dutchtown waa meel cajiib ah oo loogu talagalay guryaha bilawga ah ee qoysaska da'da yar marka loo eego awooddooda, waxaana rabnaa inaan ku dhiirigelinno kireystayaasha raba inay ku yeeshaan Dutchtown si ay u helaan agab ay sidaas ku sameeyaan!
Intaa waxaa dheer, Guddiga Gudbinta waxay sidoo kale xiiseynayaan inay la shaqeeyaan shuraakadayada ganacsiga yar yar si ay u sii wadaan iibka aadka u guusha leh ee laamiga ee aan aragnay 2021. Haddii aad u baahan tahay garaafyo, xayaysiis, ama kaalmo kale oo ka socota guddiga dalacsiinta si aad ugu dhejiso dhacdadaada tafaariiqda la xiriirta fadlan xiriir promotion@dutchtownstl.org.
Guddiga Nakhshadeynta ayaa bilaabaya barnaamijka deeqda-waji-yar. Waxay sidoo kale sii wadi doonaan shaqadooda joogtada ah si ay u kobciyaan waddooyin nadiif ah iyaga oo gacan ka helaya kuwan CID -da Dutchtown, Xiriirka Shaqada, Iyo Kooxda Qurxinta Xaafada. Waxaan raadineynaa fursado aan kula wadaagno ganacsiyada nadaafadda maxalliga ah sidoo kale, markaa haddii aad xiisaynayso ama aad fikrado hayso fadlan la xiriir design@dutchtownstl.org.
Inaga oo sii eegaya, Waddooyinka Weyn ee Dutchtown waxa ay raadin doonaan maalgelin loogu talagalay calaamadaynta meesha loo socdo iyo hab-raadinta sanadkan si loo kordhiyo hanka iyo wacyiga xaafadeena oo aan rajaynayno in aan ku hago kuwa ku cusub ganacsiyada xaafaddeena iyo meelaha soo jiidashada.
Guddiga dhaqaalaha dhaqaalaha hadda waxa lagu dalacayaa cusboonaysiinta qaybsiga Dutchtown ee saddex biloodlaha ah ee jaarkayaga ganacsiga-waxaad akhrinaysaa hadda! Guddigu wuxuu sii wadi doonaa horumarinta kheyraadkayaga Milkiilayaasha Ganacsiga Dutchtown bogga Facebook sidoo kale. Waxa kale oo aanu ku faraxsanahay in aanu bilowno shaqada khariidaynta iyo suuq-gaynta qaar ka mid ah shaqooyinka banaan ee ganacsi ee xaafadeena iyada oo ay mahad naqayso deeqda latalinta iyo adeegyada Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri.
Dabayaaqada sanadkan, Dhaqaale Muhiim u ah ayaa qorsheynaya in lala wadaago Kooxda Horumarinta Lutheran carwada shaqada ee deegaanka gu'ga. Guddigu waxa kale oo ay qorshaynayaan dhacdo isku wareeg ah oo ganacsi kaas oo aanu ku keenayno dhaqaale, sharci, iyo agab ganacsi oo yar-yar oo loogu talagalay la-talinta qaabka la qorsheeyay ee "Wax iga waydii". Haddii aad hayso fikrado la-taliyayaal ama fikrado ku saabsan sida tan looga dhigo mid guul leh, fadlan nala soo xiriir ev@dutchtownstl.org.
Ugu dambeyntii, Guddiga Abaabulka, oo gacan ka helaya Guddiga Dalacsiinta, ayaa diyaarinaya warbixin sanadle ah oo muujineysa waxa ay qabteen Waddooyinka Weyn ee Dutchtown 2021. Guddiga Ururku wuxuu kaloo raadiyaa inuu shaqaaleysiiyo tabaruceyaal cusub 2022. Haddii aad xiisaynayso iskaa wax u qabso munaasabadaha ama daabulka Waddooyinka Weyn ee Dutchtown, waad la xiriiri kartaa ururka@dutchtownstl.org.
Dhacdooyinka Dutchtown ee soo socda
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhawaan ka dhacaya Dutchtown. Haddii aad raadinayso inaad ku lug yeelato Waddooyinka Weyn ee Dutchtown ama aad rabto inaad xoogaa madadaalo ah yeelato, wax badan ayaa laga qaban karaa xaafadeena! Booqo Kalandarka Dutchtown si aad u aragto wax kasta oo soo socda.
Arbacada, Maarso 16-keeda 5:30 galabnimo • Habitat for Humanity, 3830 Koonfurta Grand
Haddii aad raadinayso inaad wacdo Dutchtown home, kaalay kaalay sidii aad uga dhigi lahayd inay ka dhacdo our Tag Dutch! dhacdo guri. Waxaan u heli doonaa agab loogu talagalay iibsadayaasha guryaha markii ugu horeysay, kuwa dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, kiraystayaasha, iyo cid kasta oo kale oo xiisaynaysa in xididada laga dhigo Dutchtown.
Sabtida, Abriil 21-keeda, maalinta oo dhan beerta VAL ee Virginia iyo Liberty
Dabaaldeg guga a xaflada block xaafadeed! Qof kasta waxaa lagu casuumay inuu u soo baxo barbecue, cabitaanno, iyo madadaalo qoyska oo dhan ah.
Kulamada guddiga Dutchtown
Waqtigan xaadirka ah, dhammaan shirarka guddiyada waxaa loo qorsheeyay inay noqdaan kuwo toos ah. Isha ku hay boggaga warbaahinta bulshada ee DutchtownSTL si aad u ogaatid haddii fursadaha shakhsi ahaaneed ay heli doonaan sidoo kale.
Talaada kasta labaad saacadu markay tahay 6pm (Maarso 8-deeda, iyo Abriil 12-keeda, Meey 10-keeda)
Ku biir khadka tooska ah adoo isticmaalaya kooxaha Microsoft at dutchtownstl.org/evmeeting
Ku soo dir guddiga ev@dutchtownstl.org
Khamiis kasta oo labaad saacadu markay tahay 6pm (Maarso 10keeda, Abriil 14keeda, Meey 12keeda)
Ku biir khadka tooska ah adoo isticmaalaya kooxaha Microsoft at dutchtownstl.org/promomeeting
Ku soo dir guddiga promotion@dutchtownstl.org
Talaada kasta seddexaad saacadu markay tahay 6pm (Maarso 15keeda, Abriil 19keeda, Meey 17keeda)
Ku biir khadka tooska ah adoo isticmaalaya kooxaha Microsoft at dutchtownstl.org/orgmeeting
Ku soo dir guddiga ururka@dutchtownstl.org
Khamiis kasta oo seddexaad ah 6pm (Maarso 17-keeda, Abriil 21keeda, Meey 19-keeda)
Ku biir khadka tooska ah adoo isticmaalaya kooxaha Microsoft at dutchtownstl.org/designmeting
Ku soo dir guddiga design@dutchtownstl.org
Dhacdooyinka Ganacsiga Xaafada
Sabti kasta gudaha Downtown Dutchtown
Booqo Downtown Dutchtown xaflad-yar sabti kasta! Ku raaxayso madadaalada tooska ah markaad wax ka iibsanayso dukaamada isdhaafsiga ah ee Downtown Dutchtown oo aad ka cunayso cuntooyinka fudud ee makhaayadaha gaarka ah ee Hoolka Cunnada ee Magaalada Eats Neighborhood. Ganacsatadu waxay bixin doonaan bandhigyo alaab, muunado, iyo waxqabadyo.
Iibka Jidka Jidka Guga
Jimcaha, Maarso 25-keeda iyo Sabtida, Maarso 26-keeda gudaha Downtown Dutchtown
Ku biir baayacmushtarka Meramec Street sanadlaha labaad ee iibka dhinaceeda gu'ga! Ka sokow wax iibsiga iyo heshiisyada gaarka ah, waxaa sidoo kale jiri doona raffles iyo abaal-marinno, agabka bulshada, hawlaha carruurta, iyo wax ka badan. Dukaan Downtown Dutchtown Jimcaha iyo Sabtida laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Dhacdooyin kale oo xusid mudan
Kafateeriyada Taageerada Tech
Sabti, Abriil 14-keeda, 10 subaxnimo ilaa 2 galabnimo • Xarunta Waxbarashada ee Thomas Dunn
Laabtoobku wuu daahay? Dhibaatada kiniinka? Taleefan ku saabsan fritz? u kaalay FreeSource's Tech Support Café's oo loogu talagalay taageerada IT-ga isku fac-wadaaga ah. Ka dhig qalabyadaada inay socdaan, baro sida loo xalliyo arrimaha, oo baro wax badan oo ku saabsan sida qalabkaaga iyo astaamahaagu u shaqeeyaan. Faahfaahin dheeri ah halkan.
The Dutchtown Xagaaga Vibes Bandhiga waddooyinka ayaa ku soo laabanaya Downtown Dutchtown Sabtida, Juun 4-teeda! Nagu soo biir dukaamaysiga, muusiga tooska ah, cuntada iyo cabitaanka, iyo wax badan, oo badan. Haddii ganacsigaagu uu jeclaan lahaa inuu kafaalo qaado dhacdada ama haddii kale ka qaybqaato, fadlan nagu soo ogeysii promotion@dutchtownstl.org.
Habeenada Filimka Dutchtown Waxay sidoo kale ku soo laaban doontaa Marquette Park xagaagan! Fursadaha kafaalaqaadka ayaa diyaar ah. Mar labaad, la xidhiidh promotion@dutchtownstl.org si aad u hesho war dheeraad ah.
Aagga Bartilmaameedka Wadooyinka Weyn ee Dutchtown
Iyadoo qayb ka ah iskaashi aan la Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri iyo Initiative Wadooyinka Muhiimka ah ee St. LouisWadooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay horumariyeen degmo bartilmaameed u ah shaqadayada horumarinta dhaqaalaha. Marka la dejiyo aaggan la beegsanayo, waxaan si wanagsan u qiimeyn karnaa meelaha lagu xooggan yahay iyo baahiyaha oo aan cabbiri karno natiijooyinka marka aan hirgelinno Qorshe Hawleedkeenna Dhammaystiran. Meesha la beegsanayo ayaa dejisa aasaaska ururinta xogta dhaqdhaqaaqa ganacsiga, degitaanka iyo boosaska bannaan, maalgashiga guud iyo kuwa gaarka ah, iyo tilmaamayaasha kale ee muhiimka ah. Xogtaas, waxaan ku horumarin doonaa adeegyadayada iyo barnaamijyadayada si aan si wanaagsan ugu adeegno bulshada Dutchtown.
Meesha la beegsanayo waxay ku faaftaa dhammaan waddooyinka ganacsiga ee Dutchtown-Meramec Street, Virginia Avenue, iyo South Grand Boulevard-waxayna diiradda saartaa agagaarka Downtown Dutchtown, degmada ganacsi ee taariikhiga ah ee ku taal agagaarka isgoyska Meramec iyo Virginia.
Laakiin waa in la ogaadaa in xitaa haddii meheraddaada ama meesha aad deggan tahay aysan ku yaalliin goobta loogu talagalay, Waddooyinka Weyn ee Dutchtown ayaa halkan u jooga inay ku caawiyaan! Haddi aad tahay mulkiilaha meherad wakhti dheer badhtamaha magaalada Dutchtown, ganacsi cusub oo Chippewa ah, ama degane xiisaynaya meelkasta oo Greater Dutchtown ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula shuraakoobayno si aan u dhisno xaafad horumarsan iyo barwaaqo la wadaago. dhammaan. Waxaan aaminsanahay waddo kasta oo ku taal Dutchtown waa Jid Weyn.
Harris-Stowe iyo Kooxda PNC ilaa Kor u Qaadista Ganacsiga Madoow
Jaamacadda Gobolka Harris-Stowe wuxuu ka helay deeq lacageed oo dhan $450,000 Mu'asasada PNC in la dhiso E3 Waxaa xoojiyay PNC, hindise looga golleeyahay in lagu dhimo faraqa soo foodsaaray bilawga ay leeyihiin dadka Madow iyadoo la horumarinayo hal-abuurka ganacsiga iyo xoojinta dhaqaalaha. Barnaamijka waxa la dejin doonaa Harris-Stowe's Xarunta Iskaashiga Ganacsiga ee dadka tirada yar ee horumarinta (MECCA), oo qayb ka ah Xarunta cusub ee hal-abuurka iyo hal-abuurka ee jaamacadda.
Sida laga soo xigtay STL 2030 Qorshaha Shaqooyinka, xidhitaanka goldaloolooyinkan dhaqaale waxay saamayn wayn ku yeelanaysaa dhaqaalaha St. Louis. Haddii Black St. Louisans ay dhisaan ganacsiyo la mid ah kuwa deggan dadka caddaanka ah, waxay abuuri doontaa 8,000 ganacsiyo cusub iyo 66,000 shaqo.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan Ameerika, kaliya 2.4% maalgelinta ganacsigu waxay aadeen bilawga ay aasaaseen dadka Madow ama Latino. "Wadashaqeyntan waxay gacan ka geysan doontaa kobcinta fursadaha iyo isbeddel macno leh gudaha jawiga bilowga ee St. Louis," ayuu yiri Michael Scully, madaxweynaha gobolka PNC ee St. Louis.
Adeegyada uu bixiyo E3 Ku shaqaynta PNC waxaa ka mid ah:
Waxbarasho iyo tababar ku saabsan qorsheynta ganacsiga, suuqgeyntooda, iyo maamulka maaliyadda
Tababarka garoonka iyo tartamada
Dhacdooyinka diiradda saaraya ganacsi-abuurka dadka tirada yar
Waxbarashada dhaqaalaha ee ardayda laga tirada badan yahay ee dugsiga sare iyo kuliyadaha
"HSSU waxaa ka go'an in ay kobciso kobaca hal-abuurka ganacsi ee soo koraya iyo kuwa mustaqbalka leh ee ganacsi ee ka imaanaya bulshooyinka aan loo adeegin, waxaana hindisahan uu naga caawin doonaa in aan gaarno howshan muhiimka ah," ayuu yiri Dr. Stacy Hollins, madaxa shirkadda Dugsiga Ganacsiga ee Anheuser-Busch ee Harris-Stowe.
Bangiga PNC dhawaan ayaa lagu dhawaaqay $88 bilyan qorshe dheefaha beesha. Qorshaha dhexdiisa, $1 bilyan ayaa lagu yaboohay si kor loogu qaado dadaallada xoojinta dhaqaalaha ee bulshooyinka madow, kuwa dakhligoodu yar yahay, iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Madaw ahaan, xaafadda dakhligoodu yar yahay, waxaanu ku faraxsanahay inaanu aragno saamaynta iman karta ee E3 Ku-shaqeynta hindisaha PNC ayaa laga yaabaa inuu keeno Dutchtown. Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown waxay wadaagaan yoolka awood-siinta deriskeenna si ay u abuuraan ganacsiyo horumarsan xaafaddayada, waxaanan diyaar u nahay oo aan doonaynaa inaan gacan ka geysanno sidii aan fursado uga heli lahayn dukaanno ku yaalla Dutchtown. Horey u socoshada, waxaan rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno PNC si kor loogu qaado bulshada ku xeeran Laanta South Grand.
Harris-Stowe sawirkiisa Paul Sableman.
Filimka hoos Qaybta Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. Qaybta Dutchtown iyo Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay February 15th, 2022 .
DutchtownSTL.org Qaybta Dutchtown Qaybsiga Dutchtown, Volume One